Dawladda Puntland & waxgaradkeeda oo ku hawlan xallinta xiisaddii ka dhalatay koontaroolka Cagaaran. [Akhris …] – Radio Daljir
Dawladda Puntland & waxgaradkeeda oo ku hawlan xallinta xiisaddii ka dhalatay koontaroolka Cagaaran. [Akhris …]
Cagaaran, July 26 – Mas’uuliyiin dawladda Puntland iyo waxgaradka gobolka Mudug oo isk kaashanaya ayaa ku hawlan sidii xal kama danbays ah looga gaari lahaa xiisad ka dhalatay bar koontarool oo ku taalla deegaanka Cagaaran, oo qiyaastii 25 KM dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Galkacyo taasi oo is rasaasayn ka dhacay ay dhalisay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jirta.
Xubo ka socda golayaasha baarlamaanka iyo xukuumada oo ka soo kicitimay magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland iyo odayaal dhaqameed aad u tiro badan oo ka anbabaxay magaalooyinka waa weyn ee Puntland, ayaa durbo ku guulaystay sidii mar kale aysan halkaasi uga dhaceen falal la mid ah kuwii shalay ka dhacay deegaanka Cagaaran oo haatan aad u degan.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta Warsame Cabdi Shirwac oo horkacayey waftigii dawladda ee deegaankaasi tagay ayaa u sheegay dadka deegaanka dhacdadaani in ay meel ka dhac ku tahay dhammaanba dalka iyo dadka reer Puntland, sidaasi dareteedna loo baahanyahay in laga waantoobo hadda kadib ku tallaabsaiga fal noocaas oo kale ah.
Is rasaasaynta ka dhacday deegaanka Cagaaran ee gaysatay khasaaraha dhimasha iyo dhaawaca iskugu jiray ayaa salka ku haysay kadib markii guddoomiyaha gobolka Mudug C/nuur Maxamed Geesay iyo ciidan uu wataa halkaasi u tageen sidii ay u qaadi lahaayeen bar koontarool ah oo taallay kadinka hore ee laga soo galo tuulada Cagaaran taas u taallay dhallinyaro tiro yar, muddo sanad ka badan waxaana halkasi ku dhintay 2nin halka 7kalana ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo qaarkood uu la dhacay gaari ay saarnaayeen, waxayna iskugu jiraan labadii dhinac ee dagaalku dhaxmaray.
Dabayaaqadii asbuucii aynu soo dhaafnay ayaa si rasmi ah loogu guulaystay in meesha laga raro ciidan daraawiish ah oo gadoodsanaa muddo dheer kuwaasi oo laftigoodu ku sugnaa isla koontaroolka haddana loogu raray xeryaha ciidanka Puntland kadib markii xal laga gaaray waxyaabihii ay tabanayeen.
Guddoomiyaha deegaanka Cagaaran Cali Xiis, oo wareysi siiyey idaacadda Daljir ayaa sheegay falkii shalay in uu ahaa mid uu mas’uuliyadeeda leeyahay maamulka gobolka Mudug, wuxuuna sheegay maamul deegaan ahaan iyo midka guud ee Puntland midna in uusan ogayn qorshaha lagu damacsanaa qaadista isbaarataasi taasi oo dhalisay is fahmi waa dhaxmara guddoomiyaha iyo ciidankii uu watay iyo kooxdii isbaarataasi u taallay.
Dhanaca kale Cali Xiis, waxaa uu sheegay in ay gacanta ku hayeen qorshe ballaaran oo lagu doonayey in lagu tir-tiro Kontaroolkaasi iyadoo lala kaashanayo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka, laakiin aysan meesha ku jirin marka in hab dagaal xal lagu gaaro.
Sikastaba ha’ahaatee haatan waxaa gacanta lagu hayaa sidii loo qaboojin lahaa xaaladda iyadoo deegaankaasi illaa xalay ay ku soo dhurmayaan mas’uuliyiinta dawladda iyo waxgaradka kala duwan.